Momba anay - Shijiazhuang Langxu Glassware Co., Ltd.
vera diffuser volotara
Fitaovana fitaratra feno
Manana traikefa azo ampiharina 10+ taona mahery amin'ny famolavolana matihanina, famokarana ary varotra
Niorina tamin'ny taona 2010 izahay, manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana kaopy rano, kaopy rano, vazy, fitoeran-jiro ary vokatra hafa manaraka (zavona rahona, sandblasting mainty, decals, decals amin'ny hafanana sy ny dingana hafa).
Miorina amin'ny fitsipiky ny "Quality First, Customer Priority", ny orinasanay dia mahazo fanohanana sy fiderana avy amin'ny mpanjifanay.Ny tanjonay dia ny "Best Price, Best Quality". Ny vokatray dia naondrana tany Amerika Avaratra, Eoropa Andrefana, Aostralia sns, firenena 30 mahery.
Ny tena vokatray dia labozia fitaratra siny / fitoerana, zava-pisotro vera, divay vera, champagne vera, whisky vera, cocktail vera, vera decanters, vera labozia & tavoahangy, vera teapot & kafe, gilasy vera, vilia baolina, vilia fitaratra, vera vazy sy ny sisa on
Tongasoa eto amin'ny orinasanay ianao, raha manana fanontaniana ianao, azafady mba hifandraisa aminay. Hiezaka izahay hanohana ny orinasanao.
Fihazonana labozia fitaratra misy sarony, Volamena fitoeran-dabozia, Varotra labozia ambongadiny, Fitazonana labozia fotsy, Fitazon'ny labozia vera cylinder, Mpiandry labozia andry,